Ogaden News Agency (ONA) – Biyo la`aan Aad U Daran oo Kajirta Magaalada Jigjiga.
Biyo la`aan Aad U Daran oo Kajirta Magaalada Jigjiga.
Posted by ONA Admin	/ October 23, 2015
Wararka kusoo dhacaya wakaalada wararka Ogadenya(ONA)ee ay ka helayso magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in biyo la’aan aad u daran ay kajirto guud ahaan magaalada Jigjiga oo dhan,Warka ayaa intaas kudaraya in uu halkii jeergaan ee biyaha ahaa kamarayo magaalada 10 birr oo lacagta Itoobiya ah.
Biyo la`aantan oo magaalada waligeedba haysatay balse Gumaysiga Itoobiya iyo wakiiladiisu ay qariyaan ayaa waxyeelo badan u gaysata dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda waxayna sababtaa in marar badan ay magaalada ka dilaacaan cuduro kala duwan.
Sicirka biyaha ayaa cirka isku shareera waqtiyadan oo kale, kadib markay ganacsadayaasha siiba Hotelada iyo inta jeebka ladani ay leexsadaan dameer gaadhiyayaasha biyaha keena magaalada, waxaa sidoo kale dhacda in mararka qaar ay qaaliyeeyaan biyaha si ay u gadan waayaan dadka danyarta ah.
Isu soobax iyo jeerigaamo fiilooyin dhaadheer kujira ayay in dhahaagu ka qabanayaan meelo badan oo kamid ah xaafadaha magaalada;Sidaasi waxaa yidhi muwaadin ku sugan magaalada oo la yaabay fiilooyinka jeerigaamada iyo dadku siday u ooman yihiin;